तपाईलाई थाहा छ महिलामा स्पर्श पहिचान क्षमता बढी हुन्छ ? | Rajmarga
कुनै पुरुष कुनै वस्तु वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई स्पर्श गरेर उसको पहिचान गर्न सामान्यतः असक्षम रहने गर्दछन्। तर महिलाका लागि यही काम निकै सजिलो हुने गर्दछ । किनभने महिलामा स्पर्शबाट पहिचान गर्न सक्ने क्षमता पुरुषको तुलनामा निकै बढी हुने गर्दछ।
यसको रहस्य औंलामा लुकेको हुने गर्दछ । किनकि महिलाको औला पुरुषको तुलनामा सानो र पातलो हुने गर्दछ । त्यसैले बढी संबेदनशील हुन्छ।
म्याकमास्टर विश्वविद्यालयका ड्यानियल गोल्डरिचले यस विषयमा अध्ययन गरेका छन्। उनले विश्वविद्यालयका करिब १ सय विद्यार्थीको सहयोगमा औंलाको आकारको असर संवेदनशीलतामा कति पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका थिए।
प्रत्येक विद्यार्थीको औलामा रफ ग्रुप लगाइयो। यो ग्रुप विस्तारै विस्तारै सानो हुंदै जाने गर्दछ । यस प्रयोगबाट स्पष्ट भयो कि जसको औंला छोटो, सानो छ यसले छिटो पहिचान गर्न सक्दछ।
ड्यानियल गोल्डरिच भन्छन्, जुन व्यक्तिको औला सानो र पातलो छ, उसमा स्पर्श पहिचान गर्ने क्षमता अधिक हुने गर्दछ । यस कुराको महिलासंग कुनै सम्बन्ध छैन । किनभने यदि कुनै पुरुषको औला छोटो र पातलो छ भने उसमा पनि यही क्षमता रहने गर्दछ ।
तर, छोटो र पातलो औला स्पर्शप्रति संवेदनशील किन हुन्छ त? यसको रहस्य औलाभित्र रहेको स्पर्श पहिचान गर्ने तन्तुमा लुकेको छ। हाम्रो छालाभित्र बाहिरी वातावरण पहिचान गर्नेका लागि कयौ स्पर्शतन्तु रहेका हुन्छन्, जसले दिमागसम्म सिग्नल पठाउने काम गर्दछ । छोटो र पातलो औलामा यो तन्तु कम स्थानमा समायोजित हुन्छन् त्यसैले यसमा बढी नै संवेदनशीलता हुने गर्दछ ।
यसले केही हदसम्म त्यसरी नै काम गर्दछ, जसरी कुनै हाई रेज्युलेशन चित्रले गर्दछ। एक वर्ग इञ्चभन्दा अधिक पिक्सल अर्थात राम्रो गुणस्तरयुक्त डिजिटल फोटो। तर यदि एक वर्ग इञ्चभन्दा कम पिक्सल छ भने त्यसको गुणस्तर पनि कम हुन्छ ।
ठुला औलामा स्पर्श रिसेप्टर टाढाटाढा हुन्छन् त्यसैले त्यसमा संवेदनशीलता पनि अपेक्षाकृत कम हुने गर्दछ ।
Previous post: कोसी सम्झौताका ६४ वर्षसम्म पनि भारतले पूरा गरेन सर्त